My World: You may say that I'madreamer ... But I'm not the only one !!!
အဲ အကြိုက်ချင်းက တူနေပါရောလား.. အရမ်းကို ပါရမီ ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါဘဲ... သူ့သီချင်းတွေ တော်တော်များများ ကြိုက်တယ်..
မအိပ်ဘဲ တစ်ညလုံး ဘာလုပ်နေပါလိမ့်အောက်မေ့တာ
ဒီကလဲ မအိပ်ဘဲ စာရေးနေတော့ တွေ့နေတယ်လေး))
ညီမ ဖြိုး ရေ
ညီမ တင်မှဘဲ ဂျွန်လင်နွန် ကိုပြန်သတိရလာတယ် အင်း လူတွေ ရူးလိုက်ကြတာနော်
ဟုတ်ပဗျာ ... ကံဆိုးလိုက်တဲ့ အိုနိုလေး . .
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ရူးတစ်ချက်က လူသားပေါင်းများစွာရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဖျက်ဆီးလိုက်သလိုပါပဲ။ အသတ်ခံရတဲ့သူလည်း သေ သတ်တဲ့သူလည်း ထောင်ကျ နဲ့ ဘာများကောင်းလို့လဲ..။
@မချော လဲ ဂျွန်လင်နွန်ကြိုက်လား၊ အမှန်က နဲရှော နားထောင်နေတာ၊ Imagine သိပ်ကြိုက်တာ သူက၊ အဲဒါနဲ့ နားထောင်ရင်း ပြန်သတိရသွားတော့ ဒီမှာ ပစ်တင်လိုက်တာ၊ မချောလဲ မအိပ်ဘူးကိုး :)
@မရွှေစင် ..ဟုတ်တယ် မနေ့က သီချင်းတွေလိုက်ကြည့်ရင်းမှ သနားတောင်သနားနေမိသေးတယ်၊
@နွေဆူးလင်္ကာ .. အော် အိုနိုလေးပဲ သနားတယ်ပေါ့ ;)
@ကိုမြစ်ကျိုး သူများတွေခေါ်သလိုပဲ၊ ရင်းရင်းနှီးနှီးခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်၊
ဟုတ်တယ်၊ ဘာမှမကောင်းဘူး၊ အဲလိုသတင်းတွေဖတ်ရ၊ စိတ်မကောင်းဘူး၊ ကိုယ်လဲ ဘာမှ လုပ်မရ၊ လုပ်လို့ရတာဆိုလို့ ကိုယ်က မသတ်မိဖို့ပဲရှိတယ် :(